Madagasikara : Mizarazara hevitra ireo mpiblaogy mikasika ny fanampiana ireo tra-boin’ny horohorontany any Sichuan · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 04 Jona 2008 15:44 GMT
Vakio amin'ny teny Français, македонски, Español, English
Nanolotra fanampiana ho fandraisana anjara amin'ny fiaraha-mientana iraisam-pirenena ho fanohanana ireo tra-boin'ny horohorontany any Sichuan, any Shina, ny governemanta Malagasy. Ny halehiben'ny voina sy izay fahasimbana dia nanosika ny governemanta hanome lelavola $100,000 USD hoan'ny masoivoho Shinoa Wo Ruidi any Madagasikara ho fandraisana anjara amin'izany ezaka iombonana izany.
Mizarazara ny blaogasyfera manaoloana izao tolo-bola izao, na dia samy miaiky fa sady tena goavana no mampalahelo tokoa izao voina nitranga tany Shina izao, ny fiheverana fa mbola mihoatry ny 70% tahan'ireo Malagasy miaina ambanin'ny fetra-fahantrana [nofaritan'ny Firenena Mikambana], ny fahitana fa manambana ny kere sady mbola maro ireo faritra any Madagasikara izay tsy mbola nitraka taorian'ny faharavana nateraky ny fandalovan'ny rivomahery farany teo.
Tomavana, izay sady mpandikatenin'ny GV Malagasy rahateo, no nanapariaka tao amin'ny Malagasy Miray :
Car c’est de façon quotidienne que la majorité de la population malgache affronte les difficultés de la cherté de la vie, augmentation du prix de l’huile alimentaire, de celui du carburant, des coupures “chroniques” de courants et autre cyclone de façon annuel. Or quel contraste entre le manque de fonds, excuse immanquablement invoquées par le gouvernement face à l’absence d’efficacité des réponses apportées à tous ces problèmes nationaux et cette solidarité internationale. A ce que je sache, ce don ne provient ni de l’argent de Ranjeva ni de celui du président Ra8, mais bien des caisses de l’état, donc du contribuable ?
“Efa isan'andro vaky izao no miatrika ny fidangan'ny vidim-piainana, ny fisondrotry ny vidin'ny menaka, ny solika, ny “delestazy” efa zary mahazatra sy ireo rivomahery miverimberina isan-taona, ny vahoaka Malagasy. Ohatry ny mifangarika be ihany ilay tsy fahampian'ny vola hoenti-manana izay fialantsiny ambeti-dresaky ny fitondrana manoatra ny tsy fahatanterahan'ireo vahaolana hany mba atolony manoitra ireny voina ireny, sy ity fahalalahan-tànana iraisam-pirenena ity. Fa angaha moa vola tao am-paosin-dRanjeva [ministry ny Raharaham-bahiny nanolotra ny vola tamin'ny anaran'ny fanjakana sy ny vahoaka Malagasy manontolo] na an'ny filoham-pirenena Ravalomanana [Ra8] io vola io, fa tsy volam-panjakana, izany hoe volam-bahoaka ?”
Niteraka hafatra vitsy nanoina azy, izany lahatsoratr'i Tomavana izany :
mitovy hevitra aminy i Manalina :
Si sans cœur tu es alors sans cœur je suis … on sait tous ce qu’il en est
“Raha tsy misy fiantrana ianao, dia izaho koa izany torak'izany … isika samy mahafantatra izay tena hevitr'iny fanomezana iny.”
Miezaka manamafy ny fiaraha-miasa amin'Shinoa ny fanjakana Malagasy. Vao namangy tany Shanghai vaotamin'ny volana May lasa teo ny filoham-pirenena Ravalomanana Marc nikaroka izay “làlana hampitomboana ny fiaraha-miasa amin'i Shina”. Ny governemanta Malagasy koa dia isan'ireo izay navitrika nanohana izay fitantanan'ny fitondrana Shinoa ny hetsika fanoherana izay nitranga tany Lhasa tamin'ny volana March sady nanamafy ny fandraisanay anjara amin'ny lalao Ôlaimpika hotanterahina any Beijing na dia atao aza hoe hisy fanaovana fahirano [izany lalao olaimpika izany] avy amin'ny firenena hafa.
Tattum dia mihevitra fa manomboka amin'ny tena no tokony iantombohan'ny fiantrana [mahantra be fiantrana] ary i Maintikely kosa dia mitatitra fa taorian'ny fandalovan'iny rivomahery iny dia mbola miandry izay ahatongavan'ny fanampiana ahafahany manolo ny tafo sy manarina ny rindrin'ny tranony hatramin'izao ny renibeny. Tsikerain'i Maintikely any amin'ny blaoginy koa ny maha-meloka ny filoha izay tsy menatra manolotra fanampiana ny tenany amin'ny fanohanany ny vidin'ny menaka tsy hiakatra amin'ny alalan'ny fanampiana avy amin'ny fanjakana, satria izy tenany [Ra8] no mitazona ny ankamaroan'ny tolotra menaka amidy any Madagasikara.
Dotmg kosa dia tsy miray hevitra amin'izany sady zendana amin'izay tsikeran'ny sasany amin'ny fiaraha-mientan'ny governemanta Malagasy :
Rehefa misy andrarezina lavo ve ao amin’ny tanànanareo dia tsy mandeha mamangy ianareo, na mandeha mamangy ihany fa tsy mitondra solondranombary tsy masaka, sa manome ihany fa fanahy iniana atao kely satria izy aza manankarena noho ianao, ka tsy ho hitan’ny vazan’ainan’ny hareny izay kely hataonao anaty valopy?
Vola indray mihevitra fa ny mahamenatra amin'ity raharaha ity dia ny hakelin'ny vola 100,000 USD raha oharina amin'ny halehiben'ny voina sy ny hamaron'ireo aina 70,000 nafoy, sady maro mbola tra-boina. Ary raha noheverina ho hetsika ihany izany fa tsy vola natao hanampy, tsy tsaratsara kokoa ve raha nahena lavitra ?
Mpiblaogy Malagasy maro no miara-mientana ho fanangonam-bola ho famatsiana ireo tra-boina nohon'ny horohorontany tany Shina sy ny Rivomahery tany Myanmar amin'ny alalan'ny vohikalam-pihaonana Facebook.
Lohahevitra hafa izay ahitana ny fiaraha-mientana iraisam-pirenen'ny mpiblaogy Malagasy koa ny antson'i Diana, mpianatra amin'ny sekoly ambarataonga faharoa any Mahajanga, izay manam-paniriana ny hanampy zaza teraka sembana sy ny fianakaviany mba ahazahoany fitsaboana tandrify sy ara-dàlana. Ny diaspora Malagasy any Italy, Frantsa, Kanada sy Afrika Atsimo no indray miara-mientana hanangom-bola ho famatsiana ny saram-pitsaboana sy fandidiana izany zaza izany sy izay havana hanara-dia azy any an-drenivotra, Antananarivo [mandritra ny faharetan'izany fitsaboana izany].
Naharaisana hafatra roa izay ampitaina eto ity lahatsoratr'i Lova ity.
Stephen mihevitra fa mety ho marika fahendrena ny fikatsahana fihavanana amin'i Shina :
Be that it as it may… but China is a rising world power, and having a friend like China in times of domestic need may prove a very wise investment.
Asa tokoa lahy izay tena marina … fa i Shina koa anie ka firenena isan'ireo izay miroborobo fatratra amin'ny lafiny iraisam-pirenena e, ary ny fihavanana amin'ny firenena toa an'i Shina dia mety ho porofom-pahendrena amin'izao fotoam-pahasarotana iraisam-pirenena izao.
Eric hu indray dia maneho ny fankasitrahany ny hetsiky ny Malagasy :
There is a very popular chinese Proverbs “滴水之恩当涌泉相报”（a drop of water received, a flowing spring should be returned )
Thank you friends, it won’t be forgotten.
Misy ohabolana Shinoa iray fanta-daza izay manao hoe “滴水之恩当涌泉相报” (teten-drano tokana voaray, renirano amin'ny taom-pahavaratra no tokony hanonerana azy)
Misaotra ry namana [tsy mahafoy], tsy ho adinonay [na oviana na oviana izao hetsika] izao.
Fanampim-baovao : vakio ireo hafatra napetraky ny mpamaky ny lahatsoratra fototra.
06 Jona 2008, 09:30